ASUR dia nanambara ny fivezivezena amin'ny mpandeha tanteraka ho an'ny Desambra 2017
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » ASUR dia nanambara ny fivezivezena amin'ny mpandeha tanteraka ho an'ny Desambra 2017
Niakatra 6.1% ny fifamoivoizana mpandeha tany Mexico, ary nihena 23.9% tany San Juan ary 12.3% tany Kolombia.
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, vondrona seranam-piaramanidina iraisampirenena misy hetsika any Mexico, Etazonia ary Kolombia, dia nanambara androany fa ny isan'ireo mpandeha ho an'ny desambra 2017 dia nihena 3.5% raha ampitahaina tamin'ny desambra 2016. Niakatra 6.1% ny fifamoivoizana mpandeha tany Mexico, ary nihena 23.9% tany San Juan ary 12.3% tany Kolombia.
Ity fanambarana ity dia taratry ny fampitahana ny 1 desambra ka hatramin'ny 31 desambra 2017 sy 2016. Ny tarehimarika voangona dia maneho ny fampitahana eo anelanelan'ny 1 Janoary sy 31 Desambra 2017 ary 2016. Tsy tafiditra any Mexico sy Colombia ireo mpandeha amin'ny zotra sy fiaramanidina ankapobeny.
Mariho fa ny fihenan'ny fifamoivoizan'ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina San Juan dia taratry ny fiantraikan'ny Rivo-doza Maria, izay namely ny nosy tamin'ny 21 septambra 2017. Tao Kolombia, nisy ny fitokonan'ireo mpanamory fiaramanidina teo an-toerana tamina kaompaniam-pitaterana iraisam-pirenena lehibe iray.
Viking dia mandray ny sambon'ny ranomasina mankany Los Angeles sambany
Azul no zotram-piaramanidina ara-potoana indrindra any Brezila